Haweenka | Radio Himilo | Page 3
Home / Haweenka (page 3)
WHO: Haweenka ayaa xilligan ka cimri badan ragga
Mahad Mohamed April 6, 2019
Himilo FM –Khubaro katirsan hay’adda caafimaadka adduunka ayaa sheegay in celceliska da’da nolosha dadka caalamka korortay tan iyo sannadkii 2000 inka badan 5 sanno. Warbixinta hay’adda WHO ayaa xustay in koror laga dareemayo celceliska da’da dadka caalamka tan iyo billowgii ...
Hindiya: Koox haween ah oo muddo 20 sanno ah ilaalinaya keymo
Mahad Mohamed March 27, 2019
Himilo FM –Koox haween ah oo ka kooban 75 qofood ayaa maalin kasta oo kamid ahayd 20-kii sanno ee la soo dhaafay waxay ilaalinayaan dhul keymo ah oo cabbirkiisu yahay 75 Hectare oo ku yaalla gobalka Odisha ee dalka Hindiya. ...
Lakulan – Gabadha 19 jirka ah ee magacyada u bixisa carruurta Shiinaha
Mahad Mohamed March 26, 2019
Himilo FM –Beau Jessup oo 19 jir hal-abuure ah ayaa boqolaal kun oo doolar waxay ka heshay adeeggeeda online-ka ah ee “Special Name” kaasi oo waalidiinta Shiinaha ka caawiya inay magac Ingiriis ah u dooraan carruurtooda. Dalka Shiinaha, magac habboon ...
9 kalkaaliso oo ka shaqeeya hal isbitaal oo wada yeeshay uur wadareed!
Himilo FM –Mid kamid ah isbitaalada ku yaalla dalka Mareykanka ayaa daaha ka qaaday in 9 kalkaaliso oo wakhti isku mid ah yeeshay uur inay mar dhaw dhali doonaan waliba xilliyo isu dhaw. Isbitaalka Maine Medical Center oo dhaca magaalada ...
Ingiriiska: Oggow sheekada ka danbeysa xariga haweenay 104 jir ah!
Mahad Mohamed March 25, 2019
Himilo FM –Booliiska dalka Ingiriiska ayaa xeray haweenay 104 jir ah oo aan gelin wax danbi ah nolosheeda hase ahaatee tallaabada lagu xeray waxaa ka danbeysa sheeko xiiso leh. Wargeyska “ Bristol Post” ayaa goor sii horreysay qoray in Anne ...
Haweenay furriin ka dalbanaysa ninkeeda oo ka jeclaaday hooyadii!
Mahad Mohamed March 24, 2019
Himilo FM –Dalka Kuwait, haweenay ayaa furriin ka dalbatay saygeeda iyadoo dacwad ka geysay maxkamad sabab la xiriirta inuu ka doorbiddo kana jecel yahay hooyadii. Xaaska oo aan la shaacin magaceeda ayaa sabab uga dhigtay go’aankeeda furriinka in saygeeda uu ...
Gabar baraha bulshada ka baafisay saaxiibkeed oo ka lumay!
Mahad Mohamed March 23, 2019
Himilo FM –Waxaa baraha bulshada looga faa’iideysan karaa siyaabo kala duwan keliya kuma koobna in wax lagu qoro lagana helo wararka. Tani waxaa tusaale u noqon kara sheekada gabar Mareykan ah oo uu meel loo dalxiiso kaga lumay saaxiibkeed iyaga ...
Haweenay 6 cunug ku dhashay sagaal daqiiqo gudaheed!
Mahad Mohamed March 18, 2019
Himilo FM –Haweenay Mareykan ah ayaa lix cunug ku dhashay muddo sagaal daqiiqo ah isbitaalka The Woman’s Hospital of Texas‎ ee dalka Mareykanka sida laga soo xigtay warbaahinta dalkaasi. Tailama Tachaka ayaa dhashay lix cunug oo labo kamid ah yihiin ...
Maxay tahay sababta haweenay 104 jir ah u codsatay xabsi?
Himilo FM – Waxay nooshahay muddo 104 sanno ah oo aysan sameyn wax dambi ah ama khilaafsan sharciga hase ahaatee waxay hadda dooneysaa inay tijaabiso dhinaca kale ee nolosha. Wargeyska “ Bristol Post” ayaa qoray in haweenay lagu magacaabo Anne ...